Njaka Ramanandafy, auteur sur FJKM Québec - Canada
Posts by Njaka Ramanandafy
21 octobre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 85 Mofonaina Anaro ny Fiangonana KORINTIANA VOALOHANY 4 : 14-214:14 Tsy ny hahamenatra anareo anefa no anoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. 4:15 Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin’i Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo; fa izaho no niteraka anareo ao amin’i Kristy […]
Hits: 106 Mofonaina « Minoa an’i Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminaniny dia hambinina ianareo » (and20) TANTARA FAHAROA 20 : 20-2320:20 Ary nifoha maraina koa izy, dia niainga nankany an’efitr’i Tekoa; ary nony nivoaka izy, dia nitsangana teo i Josafata ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Joda, sy ianareo, ry mponina […]
Hits: 109 Mofonaina Ny olona miandry ny fanjakan’Andriamanitra MARKA 15 : 42-4715:42 Ary nony hariva (satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan’ny Sabata), 15:43 dia avy i Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja, izay isan’ny Synedriona sady niandry ny fanjakan’Andriamanitra koa; ary sahy niditra tao amin’i Pilato izy ka nangataka ny fatin’i Jesosy. […]
Hits: 72 Mofonaina Ny olona feno ny Fanahy Masina ASAN’NY APOSTOLY 13 : 6-1213:6 Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Barjesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, 13:7 izay nitoetra tao amin’i Sergio Paolo, governoran’ny tany sady lehilahy hendry; ary izy nampaka an’i Barnabasy sy i […]
Hits: 126 Mofonaina Ny mpino miatrika ady TANTARA VOALOHANY 14 : 8-1714:8 Koa nony ren’ny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan’ny Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha ren’i Davida izany, dia nivoaka hiady taminy izy. 14:9 Ary dia tonga ny Filistina ka nihahakahaka teny amin’ny Lohasahan’ny Refaita. 14:10 Ary […]
6 octobre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 113 Mofonaina Ny olona mahiratra JAONA 9 : 35-419:35 Jesosy nandre fa efa noroahiny ralehilahy; ary rehefa nahita azy Izy, dia nanao hoe: Mino ny Zanak’Andriamanitra va ianao? 9:36 Ralehilahy namaly ka nanao hoe: Iza moa no Izy, Tompoko, mba hinoako Azy? 9:37 Hoy Jesosy taminy: Efa nahita Azy ianao, sady Izay miresaka aminao […]
29 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 151 Mofonaina Ny fahatahorana an’ i Jehovah OHABOLANA 9 : 7-129:7 Izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka; ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia hahazo tsiny. 9:8 Aza mananatra ny mpaniratsira ianao, fandrao halany; ny hendry no anaro, dia ho tiany ianao. 9:9 Toroy ny hendry, dia hihahendry izy; ampianaro ny marina, dia hitombo […]
27 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 104 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra EFESIANA 5 : 8-125:8 Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ( 5:9 fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana), 5:10 mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo. 5:11 Ary aza […]
23 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 103 Mofonaina Ireo toetra takiana amin’ny mpiandraikitra tsirairay avy eo anivon’ny Fiangonana MALAKIA 2 : 1-92:1 Ary ankehitriny, ry mpisorona, dia ho aminareo izao didy izao: 2:2 Raha tsy hihaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia halefako hamely anareo ny ozona, ka hozoniko ny tso-drano ataonareo; […]
22 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 116 Mofonaina « Fantaro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra eo anatrehany » (and 12 MPITORITENY 8 : 9-138:9 Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin’ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambanin’ny masoandro. Misy andro anapahan’ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. 8:10 Ary tamin’izany dia […]